Waraaqaha Shiinaha ee Transparency Transparency High for warshad macmacaan iyo alaab-qeybiyeyaal | Gelken
High Transparency gelatin S ...
Marka hore, ku qoo filimka biyo baraf ah, ka dibna biyaha gacanta ku tuuji, ka dibna u isticmaal ka dib kululeeyaha iyo dhalaalida ka dib.Waxaa loo isticmaali karaa noocyo kala duwan sida keega mousse, jiiska la qaboojiyey, kareemka qurxinta iyo jelly, pudding, jalaatada, Waxyaabaha ugu muhiimsan waa borotiinka.Protiinku wuxuu ka kooban yahay 18 nooc oo amino acids ah, toddobo ka mid ah ayaa muhiim u ah jirka bini'aadamka.Waxay ka samaysan yihiin xabagta borotiinka xoolaha ee hydrolysis.Usage: ku qoyso biyaha barafka in cabbaar ah, ka dibna biyaha ku tuuji gacanta, kuleylka iyo dhalaali biyaha kahor intaadan isticmaalin.Waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo badan oo buuxin ah sida mooska mooska, jiiska la qaboojiyey, kareemka qurxinta iyo jelly pudding. jelly, pudding, ice cream, iwm Qaybta ugu weyn waa borotiinka.Protiinku wuxuu kakooban yahay 18 nooc oo amino acids ah, oo todobo kamid ah ay muhiim u yihiin jirka bini'aadamka.
Tusaale ahaan, cambe xunbo cake laga sameeyey oo ku khalda cookies Oreo budeeyey ee subagga blender.Melt ah iyo shubaa jajabka buskut. Si fiican u walaaq. Ku shub caaryada, buskudka ku burburi qaaddo, kuna wareeji qaboojiyaha si uu u barafoobo 10 daqiiqo.Feex oo u jar cambaha qaybo yaryar oo ku rid a blender. Ku dar 15 garaam oo caano ah Isticmaal khalka si aad ugu dhex qasto dhoobada, u miisaami oo 300g u qoro muraayadda; Kiniiniyada 'Gelatin' waxay ku dartaa biyo yar si ay u jilciso; kululee caanaha 15g, sonkorta la shiiday iyo kiniiniyada gelatin iyagoo isku dhan biyo illaa inta ay ka milanayso. Qabooji Ku darso cambaha miraha isku dar ah oo si fiican walaaq. Kariimka ku kari ukunta korantada ukunta ilaa 7 oo u qaybi; Kariimka ku dar maraqa cambaha oo si fiican ugu walaaq spatula caag ah si aad u sameysid buuxinta muuska galay daasadda 8-inch ee keega ah. Ku daadi hilibka cambaha ee xarunta. Ku shub buuqa hadhay mooska oo ku nadiifi spatula caag ah. Qaboojiyaha 4 hours.Then dhigi muraayad ah, kiniin gelatin la yar oo biyo ah si ay u jilciso, Heat oo biyo ilaa wuu dhalaalaa galay dareere ah, ka dibna ku qaboojiyo set aside.Add dareeraha xeerka la qaboojiyey gelin cambe dartaa iyo walaaq well.Slowly ku shub cirifka keega mooska; Xumbbo yaryar oo dusha sare ah ayaa lagu soo qaadaa burushka cadayga oo lagu rido qaboojiyaha 2 saacadood. Ka qaad oo ku afuuf caaryada hal daqiiqo
Hore: Xaashida Gelatin ilaa Budada
Xiga: Gelatin-warshadeed oo loogu talagalay koollo